ပီတိ: September 2009
ဒီနေ့က ကျွန်တော့်အကိုရဲ့ မွေးနေ့ပါ။ ဒီနှစ်မှာ အမှတ်တရရေးဖို့ မအားလပ်ဖြစ်နေတာမို့ အမဖြစ်သူက ရေးပြီးပို့လာပါတယ်။ အကို့မွေးနေ့အမှတ်တရအဖြစ် တင်လိုက်ပါတယ်။
ဒီနေ့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အတူ ကျမတို့ တက်ရောက်ပညာသင်ကြားနေတဲ့ University ရဲ့ အနီးဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့မြို့လေးတစ်မြို့ကို အလည်သွားရင်း သူငယ်ချင်းက သူ့အဖေအတွက် နာရီဝယ်ချင်တာနဲ့ နာရီဆိုင်ထဲကို ၀င်ကြည့်ရင်းက ကျမရဲ့ နာရီဓါတ်ခဲကုန်ပြီး ဓါတ်ခဲမလဲ ဖြစ်ပဲ ထား ထားတာ အတော်ကြာနေပြီဖြစ်တဲ့ ကျမရဲ့နာရီလေးကို သတိရလိုက်မိတယ်။
ဒီနာရီလေးက လွန်ခဲ့တဲ့ (၅)နှစ်က ကျမအစ်ကို ခရီးသွားစဉ်က အပြန်လက်ဆောင်အဖြစ်ကော မွေးနေ့လက်ဆောင်အဖြစ်ပါ ၀ယ်လာပေးခဲ့တာလေ။ ကျမက အိမ်မှာ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ထည်း ပါတော့ အိမ်က ဘယ်သူဘဲခရီးသွားသွား ကျမအတွက် အပြန်လက်ဆောင် တစ်ခုခုတော့ ပါလာစမြဲပဲလေ။ အစ်ကိုကတော့ သူခရီးထွက်တဲ့အခါတိုင်း သူဖို့သာ မပါရင်ရှိမယ် အိမ်ရှိလူအားလုံးအတွက်တော့ ပါလာစမြဲပါပဲ။ ကျမကတော့ လက်ဆောင်သိပ်ပါလေ့မရှိပါဘူး။ မွေနေ့ လက်ဆောင်ဆိုရင်လည်း ဟိုဟာယူမလား ဒီဟာယူမလားမေးမေးပြီး များသောအားဖြင့် ဘာမှ မပေးဖြစ်တာများပါတယ်။
အစ်ကိုက အငယ်တွေအပေါ်ညာတာ ဂရုစိုက်ပြီး မိသားစုအပေါ်သံယောဇဉ်ကြီးရှာသူပါ။ ဒါကိုငယ်ငယ်တုံးကတော့ အစ်ကိုကိုနားမလည်ခဲ့ပါဘူး။ အစ်ကိုပာာ ကျမတို့ကို ဂရုမစိုက်ဘူးလို့ ထင်ခဲ့မိတယ်လေ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျမနဲ့ မောင်လေးကသာ ကစားဖော်ကစားဖက်ဖြစ်ပြီး အစ်ကိုကတော့ ကျမတို့နဲ့ ကစားလေ့မရှိပဲ သူ့သူငယ်ချင်းတွေ့နဲ့သာ ကစားလေ့ရှိလို့ပါ။ တကယ်တော့ အစ်ကိုဟာ အသေးအဖွဲကိစလေးတွေမှာ ဂရုမစိုက်တတ်ပေမဲ့ တကယ်လိုအပ်တဲ့အခါမှာတော့ ဂရုစိုက်လေ့ရှိတယ်ဆိုတာကို ကျမတို့ကြီးလာတဲ့အခါမှာတော့ နားလည်သဘောပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် မိသားစုနဲ့ဝေးပြီး ပညာသင်ကြားရတဲ့ အခါမှာတော့ မိဘရဲ့ဆုံးမမှုတွေသာမက အစ်ကိုရဲ့ လမ်းညွှန်မှုတွေဟာ ကျမအတွက် အဖိုးမဖြတ်နိုင်ဘူးဆိုတာကို ခံစားသိမြင်လာခဲ့တဲ့ အချိန်မှာတော့ အစ်ကိုဟာ ဖေဖေ ပြီးရင် ကျမရဲ့ ဒုတိယ ဖခင်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားမိပါတယ်။
အဆောင်ကိုပြန်ရောက်တဲ့ အခါမှာတော့ အစ်ကိုပေးတဲ့ မွေးနေ့လက်ဆောင်နာရီလေးကို ကြည့်ရင်း ဒီနေ့ဟာဖြင့် အစ်ကိုရဲ့ မွေးနေ့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို သတိရလိုက်မိပါတယ်။ တကယ်ဆိုရင် မိသားစုဝင်တွေရဲ့ မွေးနေ့မှာ စာရေးပြီးလက်ဆောင်ပေးလေ့ရှိတာ မေမေ နဲ့ မောင်လေးက ပေးလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီနှစ်မှာတော့ မေမေရော မောင်လေးရော အလုပ်ရှုပ်နေကြပြီး စာရေးချိန်မကြတဲ့အတွက် အစ်ကိုအတွက် မွေးနေ့လက်ဆောင်စာလေးကို မေမေ နဲ့မောင်လေးကိုယ်စား ကျမကပဲ တာဝန်ယူပြီးရေး ရင်း အစ်ကို စိတ်၏ ချမ်းသာခြင်း ကိုယ်၏ ကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေလို့ဆုတောင်းရင်း ကန်တော့လိုက်ပါတယ်။
ဒါကတော့ အကို့မွေးနေ့အတွက်ဆို အမက သူ့ဘာသာလုပ်ထားတဲ့မုန့်ပါတဲ့။ သူတစ်ယောက်ထဲစားလို့ကုန်လောက်ပါပြီ။
စာတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ မရေးဖြစ်ပေမယ့် ကဗျာတစ်ပုဒ်ကိုတော့ ရေးပေးဖြစ်လိုက်ပါသေးတယ်... စိတ်ကူးရသလို အင်္ဂလိပ်လို ရေးလိုက်မိတာပါ။
Happy Happy 40th Birthday
Let me Let me wish for the birthday.
Start Start the matured journey
Dart Dart what your heart says
Love Love the way that you stay
Hope you get all of the best things
A best that I got is you being
Wish you have beautiful feeling
Many happy come to your way...
And we are here loving you all the way...
Wish to haveahappiest birthday....
Posted by P.Ti at Thursday, September 03, 20092comments Links to this post
Labels: မမ, မျှဝေခံစားခြင်း